Kulammada Kiniisadaha Markhaatiyaasha Yehowah Waa Sidee?
Kulammadii Kirishtaanka hore waxaa ka tirsanaa heeso, tukasho, wadahadalka iyo akhriska Kitaabka Quduuska ah. (1 Korintos 14:26) Kulammadayada wax la mid ah baad ka fili kartaa.
Tilmaanta waa mid Kitaabka ka timid oo waxtar leh. Sabtida ama Axadda kiniisad kasta khudbad Kitaabeed oo 30 daqiiqadood socota bay helaan. Khudbaddan waxay ka hadashaa siduu Kitaabka Quduuska ah u khuseeyo nolosheenna iyo waqtiga aan ku nool nahay. Waxaa inoo fiican inaan Kitaabkeenna kala socono waxyaalaha khudbadda laga sheego. Khudbadda kaddibna waxaa la qabtaa Dhigashada Majalladdeenna oo hal saac ah oo ku saabsan qayb ku jirto daabacaadda dhigashada ee majalladdeenna. Dadkoo dhan baa ka qaybqaadan karo wadahadalka. Wadahadalkaas wuxuu inagu caawiyaa inaan tilmaanta Kitaabka nolosheenna ku isticmaalno. Isku wax baa lagu bartaa kiniisadaheenna adduunka oo dhan oo ay tiradoodu dhaafto 110,000.
Waa nala caawiyaa sidaan u wanaajinno habka aan dadka wax u barno. Asbuuc kasta waqtiga fiidka waxaan helnaa kulan saddex qayb u kalabaxa oo la yiraahdo Nolosheenna iyo Wacdigeenna Kirishtaanka. Kulankan wuxuu ku salaysan yahay Buugga Waxbarashada Kulanka Nolosha iyo Wacdiga oo bil kasta soo baxa. Qaybta ugu horreysa oo ah Maaliyadda Erayga Ilaahay waxay nagu caawisaa inaan aqoon u yeelano qayb ka mid ah Kitaabka Quduuska ah oo walaaluhu horey u akhriyeen. Kaddibna qaybta Wacdiga ku Dadaal baa tusaalooyin nagu tusta habka Kitaabka dadka kale loo baro. Markaasna la taliye baa aragtidiisa inoo sheego sidaan akhriskeenna iyo hadalkeenna u wanaajinno. (1 Timoteyos 4:13) Ugu dambeyn qaybta Nolosha Kirishtaanka baa lagu eegaa sida Kitaabka tacliimihiisa maalin walba loo hirgelin karo. Qaybtan waxaa ka mid ah wadahadal suʼaalo la socdaan oo sii kordhiya fahanka Kitaabka.
Marka ad kulankeenna booqatid shaki ku ma jiro inaad aad uga heli doontid waxbarashada fiican ee Kitaabka lagaa siin doono.—Ishacyaah 54:13.
Kulammada Markhaatiyaasha Yehowah maxaad ka fili kartaa?
Kulammadeenna midkee baad rabi lahayd inaad aaddid?
Fiiri waxyaalaha la baran doono toddobaadyada soo socdo. Ka sii feker waxyaalaha ad Kitaabka ka baran doontid oo noloshaada wax u tari kara.
Wadaag Wadaag Kulammadeenna Waa Sidee?
Kulammada Markhaatiyaasha Yehowah Waa Sidee?